Isbadal ku yimid qorshaha wasiirada iyo wiil uu abti u yahay Xasan Sheekh oo loo dhiibayo gobolka - Caasimada Online
Home Warar Isbadal ku yimid qorshaha wasiirada iyo wiil uu abti u yahay Xasan...
Isbadal ku yimid qorshaha wasiirada iyo wiil uu abti u yahay Xasan Sheekh oo loo dhiibayo gobolka
Muqdisho (Caasimada Online)- Waxaa dhawaan idinla wadaagnay warbixin ku saabsaneyd inuu Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr uu wasiirka Arrimaha gudaha ka dhigi doono Thaabit Cabdi Maxamed oo ahaa agaasimihii Madaxtooyada Xilligii Xasan Shiikh Maxamuud sidoo kale markii dambe loo magacaabay ku xigeenka safaaradda Somalia ee Mareekanka iyo qunsulka guud ee safaaradda.
Haddaba illo wareedyo rasmi ah ayaa muujinayo inay arrintaas isbadashay waxaana Thabit loo qorsheeyey xil kale oo muhiim ah iyadoo wasiirka arrimaha gudaha laga dhigi doono shaqsi aan weli la carabaabin balse ay Caasimadda Online baaritaan kusoo sameyn doonto.
Sida ay sheegayaan warbixindii ugu dambeeyey sido kalana ay xaqiijnayaan illo wareedyo lagu kalsoonaan karo Thabit Cabdi Maxamed ayaa laga dhigi doonaa Gudoomiyaha gobalka iyo Duqa magaaladda Muqdisho oo markii hore la hadal hayey in la kala qaadi doono balse midaas xaaladda way iska badashay sidaas ayeyna xaaladda sii ahaan doontaa.
Qorshahaan ayaa dhibaato weyn ku ah Yuusuf Jimcaale oo la filayo in bisha soo socot xilkaan laga qaado waxaana horey ugu magacaabay Madaxweynihii waqtigiisa dhamaaday Xasan Shiikh Maxamuud.
Thaabit Cabdi Maxamed waxa ay aad isugu dhaw yihiin Xasan Shiikh Maxamuud balse khilaaf soo kala dhex galay awgiis ayaa Thabit looga qaaday xilkii uu madaxtooyada ka haayey oo ahaa agaasime.
Inkastoo Thabit iyo Xasan ay isku dhaceyn haddana midaas ma keenin inuu xiriirkooda toos u kala go’ maadaama uu Thaabit qabo gabar ay dhashay Nuurto Shiikh oo ah haweeney la dhalatay Xasan Shiikh Maxamuud waxaana markii dambe loo magacaabay ku xigeenka safaaradda Mareekanka.
Aqbaartaan iyo xogtaan ayaa kusoo aadeyso xilli la filayey in Thabit laga dhigi doono wasiirka Arrimaha Gudaha oo la siin doono Beesha Abgaal oo uu Thabit kasoo jeedo balse lama ogo halka ay arrintan iska badashay iyo waxa uu ku yimaaday qorshahaan cusub.